Khuburo Jarmala oo ku taliyay in dadkii lagu talaalay Astrasenika la siiyo mid kale - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Khuburo Jarmala oo ku taliyay in dadkii lagu talaalay Astrasenika la siiyo mid kale
Khuburo Jarmala ayaa ku taliyay in dadka ka weyn lixdan sano ee qaatay talaalka Astrasenika in la siiyo talaalkooda labaad daawo kale oo aan ahayn Astra. Waxa ay khuburadu magacowday daawooyinka Faysar ama Modeerna.
Ilaa hadda ma jirto wax cadayna in talaalka labaad ee Astra uu khatar ku keenayo dadkii hore loo siiyay ayay qirteen khuburada Jarmalku waxa kale oo ay raaciyeen in welli aanu jirin wax cadaynaya in labada talaal oo kala duwan ay wada shaqayn karaan.
Daawada Turkiga iyo Maraykanka ee Faysar ayaan iyada la sheegin wax dhiig guntan ah. Dhinaca kale dawlada dhowra ayaa markale hakiyay isticmaalka Astra kadib markii hal qof ku dhintey.
Astrasenika ayaa waxa qaartay malaayiin Jarmala oo ilaa kumanaan la siiyay talaalka labaad. Hay’adda caafimaadka u qaabilsan reer Yurub ayaa iyadu fasaxdey halka ururka caafimadka aduunkuna isku raacay in faaiidadeeda ka badan tahay khasaaraheeda.